Vaky trano sy fanafihana Noraisim-potsiny teny amin’ny hopitaly ilay jiolahy
Nandray bajaj avy hatrany namonjy hopitaly ireo jiolahy naratra nandritra ny fifandonany tamin’ny raim-pianakaviana notafihiny.
Tany amin’io toeram-pitsaboana io no voajokon’ny polisy avy ao amin’ny “Commissariat central Mahajanga”, ilay malaso ny andron’ny fifidianana teo. Jiolahy roa nitondra basy vita gasy sy «poignard» no niditra an-keriny ka raikitra ny fifandomana tao amin’ny tokantrano iray ao Mahavoky Avaratra, Mahajanga. Samy naratra ilay raim-pianakaviana voatafika sy ireo jiolahy nandritra ny fanafihana. Nandray bajaj ireo jiolahy. Nampandre ny polisin’ny kaomisaria avy hatrany ny lasibatra. Narahin’ny polisy avy hatrany ka teo am-pitsaboana ny ratra no noraisim- potsiny ny iray tamin’ireo jiolahy fa tafaporitsaka kosa ily iray. Mbola tratra tany aminy tao amin’ny hopitaly koa ireo basy vita gasy sy zava-maranitra ka talanjona ireo mpitsabo. Jiolahy roalahy sy vehivavy roa mpiray tsikombakomba izay mpampiantrano ireo olon-dratsy koa no tratra taorian’ny fikarohana. Nahitana entana halatra an’olona voatafika tao Ambondrona ny alarobia talohan’io tao amin’izy ireo. Ireo jiolahy ireo koa no tompon’antoka tamin’ny fanendahana mpivady ny talata 21 mey tamin’ny 10 ora alina.